Ny fanampiana tsara indrindra ho an'ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra
Ny sisin-trosa ho an'ireo orinasa mandray vahiny dia mety ho somary tery indraindray. Amin'ny maha orinasa mandray vahiny anao, dia hevitra tsara foana ny nanampy renirano fidiram-bola hanampiana anao hampitombo ny asanao. Tahaka ny orinasa hafa, ny fandraisam-bahiny dia manana vanim-potoana avo sy ambany, izay midika fa mila manao izay fara herintsika isika rehetra mba hitrandrahana avo.
Ny iray amin'ireo fomba mora indrindra hanatsarana ny farany dia amin'ny fanesorana ireo vokatra sy serivisy fanampiny. Hitanay, tamin'ny traikefa niainantsika, fa ny add-on dia tsy mahasoa anao fotsiny fa ny vahiny koa mankasitraka ireo tolotra sy sanda fanampiny. Hitanay fa mampiroborobo naoty tsara kokoa izany. Mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny rafitra PMS hafa, izay mety tsy manana an'io endri-javatra io, na tsy mamela anao hivarotra fonosana amin'ny alàlan'ny tranokalanao, tsy misy na iray aza amin'ireto famerana ireto miaraka amin'i Zeevou, nieritreritra ny zava-drehetra izahay hanampy anao hamorona portfolio add-ons matanjaka. .
Raha tsara vintana ianao fa efa mampiasa vahaolana manome tolotra fanampiny dia matetika mety ho sarotra ny manara-maso ny vola miditra amin'ireo add-on ireo, indrindra ny manara-maso izay fandaniana rehetra mifandraika amin'izany. Rehefa manombatombana vahaolana hafa dia hitanay fa tsy afaka miasa mihitsy ny tombom-barotra isaky ny upsell, ary avy eo ampidirina ao amin'ny fanambarana P&L isam-bolana. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia hitantsika ny ankamaroan'ny mpampiantrano miala amin'ny hevitra hampiasa add-ons noho ny fahasarotana tsy ilaina sy ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ara-bola mety.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Add-ons manampy?
Ny fampiasa vaovao an'i Zeevou, add-ons, dia eto hanampy anao hahomby sy hanampy tombony bebe kokoa amin'ireo vahininao, tsy misy manahirana. Zeevou dia mamela anao tsy hamita fotsiny ny fivarotana ny efitranonao alina fa koa hivarotra fanampin-tsakafo ho an'ireo vahiny mamandrika amin'ny alàlan'ny tranokala famandrihana mivantana. Ankoatr'izay, azonao atao koa ny mampifandray add-ons amin'ny famandrihana azonao amin'ny iray amin'ireo OTA 200+ an'i Zeevou Channel Manager mifangaro amin'ny. Ity fiasan-dàlana avy any Zeevou ity dia mahatonga ny add-ons hahazo fahitana bebe kokoa ary hanampy ny mpanjifa ho avy hahita fa handeha lavitra lavitra ianao hanolotra serivisy lehibe. Zeevou dia mamela anao mandeha ho azy ihany koa fandoavam-bola amin'ny ireo rohy azo antoka 3-D.
Rohy azo antoka 3-D dia natao mba hahazoana antoka fa azo antoka sy azo antoka tanteraka ny fifanakalozana an-tserasera amin'ny karatra debit. Ka tsy ilaina hatahorana ny hosoka amin'ny Internet satria i Zeevou no miantoka ny fiarovana ny dingana rehetra amin'ity dingana an-tserasera ity. Ka afaka matoky ianao fa azo antoka sy tsy misy fihenjanana ny fandoavambola rehetra.
Ny add-ons dia azo ampifandraisina amin'ny manokana fananana, noho izany ity fampiasa ity dia azo ovaina indrindra amin'ny filanao sy ny toerana manokana. Eto amin'ny Zeevou, izahay koa dia manome safidy maromaro manodidina ny fomba tokony hikajiana ny add-on hahatratrarana ny takinao. Ankoatry ny fananana vidin'ny varotra dia azo ampifandraisina amin'ny vidin'ny fividianana ihany koa ny fanampiana. Io dia ahafahan'i Zeevou mikarakara ny tombom-barotra amin'ny sidina mba hahitanao ny sisiny amin'ny famarotana ny add-on tsirairay. Ny mpampiantrano dia afaka manondro raha tokony ho ny ampahany amin'ny tombony azo Owner ny fananana, ary, raha izany, firy isan-jato. Eo am-pelatananao tanteraka ny zava-drehetra mba hisafidianana izay hetsika tianao hatao. Ny add-ons dia azo apetraka ihany koa ho fankatoavana avy amin'ny mpampiantrano, ary ny faharetan'ny fotoana fahatongavana ihany no azo hamandrihana mialoha.
Ny add-on dia tsy endri-javatra tsotra fotsiny ao Zeevou. Izy io koa dia ahafahanao mamaritra sarany amin'ny fidirana an-tsekoly / fidirana mialoha, ary koa ny saram-pahafahana tara amin'ny fari-marika, ary hihoarana ireo eo amin'ny sehatry ny fananana. Anisan'ny Dingana fanamafisana ny famandrihana 5-dingana, angoninay ny ora tokony ho fahatongavan'ilay vahiny. Niorina amin'ity ampahan'ny rafitra ity dia ny fampiakarana ny fizahana mialoha sy tara. Ampahafantaro ny vahiny ny sarany rehetra mifandraika amin'ny fotoana fisidinana nofidiny ary afaka mandoa izany ho anisan'ny dingana manaraka. Ity dingana ity dia manampy ny vahiny hatoky ny rafitrao.
Ny endri-javatra nampian'i Zeevou dia manome vahaolana maharitra amin'ny fivarotana vokatra fanampiny. Amin'ny fampiasana an'ity endri-javatra ity dia afaka mifehy tanteraka ny vokatrao ianao ary mitantana tsara ny tombom-barotra azonao.
Ny fampiasa Zeevou add ons dia hanampy anao amin'ny lasa vokatrao ary hanao ny fizotrany mivantana.
Mangataha demo Zeevou anio, ary avelao hasehontsika anao ny mampiavaka ny Add ons sy ny tombontsoa rehetra azon'i Zeevou hatolotra ny orinasanao. Ny ekipanay dia hanao izay hahazoana antoka fa manampy anao amin'ny dingana rehetra!
Laharana fandraisana na rohy Ekipa mpanohana an'i Zeevou amin'izao fotoana izao.